Kodiarana ambany kankana ambany backlash zoro servo - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, variatera, kojakoja helikaly, faribolana kely bevelle, boaty fambolena, kodiarana traktera, kitapo kamiao, boaty kankana
Home / Speed ​​Reducer & Gearbox / Kodiarana servo worm servo zoro ambany
Fihenan'ny kankana ambany miverina miamboho ambany
ny kankana avo lenta dia fanoloana mety tsara ho an'ny boaty fitahirizan'ny planeta, ny mpanamboatra fitaovana dia afaka mampihena be ny vidin'ny fampiasana boaty boaty planeta.
Ny vahaolana mety indrindra an'ny mpamolavola dia ny mihodina 90 degre hametrahana ireo rafitra fiara mpamily motera servo
Ny vatan-kankana ao anaty andiany dia azo entina amina motera iray hahatratrarana kodiarana kankra maro. Nampiasaina tamin'ny volavolan-tsolosaina fandefasana finday sy fitaovana hafa izy io
Ny singa miady amin'ny kankana Servo dia manana karazany telo: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, miaraka amina kankana mitarika roa. Ny sisin'ny havoana kankana sy havanana amin'ny zoro firaka samihafa, ka mahatonga ny hatevin'ny nify hiova tsikelikely, mba hahafahanao mihetsika kankana hazo sy hanitsy backlash.
Fomba fiasa ambany:
- Ny lamosina gyration gear worm dia azo ovaina amin'ny arc ambanin'ny 1.
- Reducer dia afaka manamboatra ny banga aorian'ny fampiasana azy.
- Ampidiro miaraka amin'ny tsiroaroa: azo antoka tsy misy valiny.
- Famoahana mampiasa kambana peratra clamping: azo antoka tsy misy valiny.
Fihetsika mihodina mihatra
- mampihena ny tabataba sy ny hovitrovitra ateraky ny fiovan'ny enta-mavesatra sy ny fiovan'ny hery fanapahana.
- mampihena ny tabataba sy ny fiatraikany vokatry ny corotation sy ny mivadika.
- Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny abrasion kankana.
- Fampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny kankana valiny.
Fitaovana fanaovana mari-tsoratra Precision
- Masinina CNC, tsipika fivoriambe, milina fanapahana, tsipika fandefasana, sns.
- Fitaovana fanoratana, ny mekanisma famakiana marina dia mitaky fotoana fivezivezena marina.
Toe-javatra fanovana haingana
- Fampihenana ny tabataba sy ny fiatraikan'ny fiovan'ny hafainganana.
- Fampihenana ny abrasion kankana vokatry ny fiovan'ny hafainganana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra- azafady ampidino-santionany: